« Mba ho tantarainao amin’ny zanaka aman-jafinao » (Eks, 10,2) - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
ANDRO MANERAN-TANY FAHA-54
HO AN’NY FIFANDRAISAN’NY MPIARA-BELONA
Lasa Tantara ny fiainana.
Tiako ny hampifantoka ny hafatra amin’ity taona ity amin’ny lohahevitra momba ny fitantarana, satria mino aho, mba tsy ho diso lalana isika, dia ilaintsika ny miaina ny fahamarinan’ny tantara tsara : tantara manorina, fa tsy mandrava ; tantara manampy amin’ny fahitana ny fototra niaviana sy ny hery hiarahana mandroso. Ao anatin’ny fifangaroan’ny feo sy ny hafatra manodidina, dia ilaintsika ny tantaran’olombelona miresaka momba antsika sy ny kanto ao amintsika. Tantara mahay mijery amin-kalemem-panahy an’izao tontolo izao sy ny zava-miseho ; mitantara fa tenona iray ihany isika, maneho ny fifamatoran’ny tady mampifandray antsika rehetra.
1. Mamorona tantara
Mpitantara ny olombelona. Hatramin’ny fahazazantsika, noana tantara isika, toa antsika noana sakafo. Na io amin’ny endrika angano, na tantara foronina, sarimihetsika, hira, vaovao… Miantraika amin’ny fiainantsika ny tantara, na dia tsy tsapantsika aza izany. Isika no manapa-kevitra matetika amin’izay tsara na ratsy arakaraka ny mpandray anjara ao amin’ny tantara sy ny tantara voaraintsika. Manamarika antsika ny tantara, mamolavola ny zavatra inoantsika sy ny toetra amam-pihetsitsika, ary afaka manampy antsika amin’ny hahazo sy hanambara ny maha izy antsika.
Ny olombelona ihany no mila fitafiana handrakofana ny fahalemena (jr. Jn 3,21), nefa izy irery ihany koa no mila mifampitantara, « misalotra » ny tantara mba hiarovana ny aina. Tsy manenona fitafiana fotsiny isika, fa ny tantara ihany koa : noho izany, ny fahafahan’ny olombelona « manenona » dia sady mitondra any amin’ny lamba no mankany amin’ny lahatsoratra. Manana « sehatra » iombonana ny tantara amin’ny fotoana rehetra : rafitra manomana « mahery fo », mitovy andavanandrom-piainana, izay, mba hanarahana ny nofy, dia miatrika ny zava-tsarotra, miady amin’ny ratsy, entanin’ny hery ka tonga be herim-po, herin’ny fitiavana. Amin’ny firobohana ao amin’ny tantara no hahafahantsika mahita ny antony mampafana fo hiatrehana ny fanambin’ny fiainana.
Mpitantara ny olombelona satria izy miova, mifankafantatra, mihamivoatra ao amin’ny firindran’ny zava-miseho isan’andro. Nefa, hatrany am-piandohana, dia tandindomin-doza ny tantarantsika : misoko hatrany ao amin’ny tantara ny ratsy.
2. Tsy tsara avokoa ny tantara
« Raha mihinana ianareo, dia ho tahaka an’Andriamanitra » (jr. Jen 3,4) : mampiditra fatorana saro-bahana ao amin’ny firindran’ny zava-miseho ao amin’ny tantara ny fakam-panahin’ny bibilava. « Raha manana ianao, dia ho tonga, ka hahatratra…. », mbola mibitsibitsika izany ankehitriny ireo izay mampiasa ilay antsoina hoe storytelling (fomba fampitana hafatra miendrika fitantarana toy ny angano) mba hampanjary fitaovana ny olona. Firifiry ireo tantara manapoizina antsika, izay mandresy lahatra antsika fa, mba ho sambatra dia mila manana sy manjifa lalandava isika. Tsy tsapantsika mihitsy hoe ahoana no mahatonga antsika ho tia tabataba sy fifosana ; manjifa herisetra sy zava-poana betsaka isika. Matetika amin’ny tambajotran’ny fifandraisana, raha tokony ho tantara manabe, izay mitondra amin’ny fifandraisana sosialy sy kolontsaina samihafa, dia tantara manimba sy manafintohina no atao, manimba sy manapaka ny kofehy marefo amin’ny fiarahana monina. Amin’ny fanangonana vaovao tsy voamarina, amin’ny famerenana ireo lahateny tsy misy heviny sy amin’ny lainga tsara lahatra, mandratra sy feno fankahalana, dia tsy mamorona tantaran’ny olombelona, fa manala ny olombelona amin’ny hasiny sy ny fahamendrehany.
Na izany aza, satria tsy dia maharitra loatra ireo tantara atao fitaovana sy ampiasaina ho amin’ny fanjakazakana, ny tantara tsara dia afaka mihoatra ny fetran’ny habaka sy ny fotoana. Ary taon-jato maro aty aoriana, dia mijanona ho manan-danja hatrany satria mamelona ny aina izy.
Amin’ny fotoana izay mampitombo be ny lainga, ka tonga any amin’ny ambaratonga ambony indrindra (deepfake : hosoka faratampony amin’ny fampiasana feo sy sarimihetsika), dia ilaintsika ny fahendrena mba handraisana sy hamoronana ny kanto, ny tsara sy ny tantara tsara. Mila manana herim-po isika mba hanoherana ny diso sy ny ratsy. Ilaintsika ny faharetana sy ny fandanjalanjana mba hahitana indray ny tantara izay manampy antsika tsy hanary ny fifanjohiana eo anivon’ny ratram-po marobe amin’izao fotoana izao ; tantara mamerina ny fahazavan’ny marina ny maha izy antsika, hatramin’ny herim-po tsy misy mpahalala eo amin’ny fiainana andavanandro.
3. Tantaran’ny tantara
Ny Soratra Masina no Tantaran’ny tantara. Firifiry ireo tranga, vahoaka, olona no asehony antsika ! Asehony antsika hatrany am-boalohany Andriamanitra mpahary sady mpitantara. Noho izany, Manonona ny Teniny sy ny zavatra misy izy (jr Jen 1). Ao anatin’ny fitantarany, miantso ny zavatra ho amin’ny aina Andriamanitra, amin’ny fara-tampony, nahary ny lehilahy sy ny vehivavy izy ho toy ny mpifanakalo hevitra aminy sy mpamokatra tantara miaraka aminy. Ao amin’ny Salamo, ny zavaboary mitantara amin’ny Mpahary : « Ianao no namorona ny voako, sy nanenona ahy tao an-kibon’i neny. Miaiky ny zava-mahagaga manoloana anao aho, izaho zavaboary mahagaga loatra […] Tsy niafina taminao ny taolako, tamin’ny namoronanao ahy tao amin’ny miafina, voatenona tamim-pahaizana, tao amin’ny fanambanin’ny tany. Tsy tonga lafatra tany am-pahaterahana isika, ka mila « tenonina » sy « haingoina » lalandava. Nomena antsika ny aina ho toy ny fanasana hanohy amin’ny fanenomana io « zava-mahagaga » izay maha izy antsika io.
Amin’io heviny io, ny Baiboly dia tantaram-pitiavana lehibe eo amin’Andriamanitra sy ny olombelona. Eo anivony i Jesoa : Maneho ny fahatanterahan’ny fitiavan’Andriamanitra ny olombelona ny tantarany sy ny tantaram-pitiavan’olombelona an’Andriamanitra. Noho izany, voantso ny olombelona, amin’ny taranaka mifandimby, hitantara sy hametraka ao amin’ny fitadidiana ireo fizarana manan-danja ao amin’ity Tantaran’ny tantara ity, ireo izay afaka mampita ny hevitry ny zava-nitranga.
Ny lohatenin’ity hafatra ity dia notsoahina tao amin’ny bokin’ny Eksaody, tantara fototra ao amin’ny baiboly izay ahitana ny fandraisan’Andriamanitra anjara ao amin’ny tantaran’ny vahoakany. Noho izany, raha vao mitaraina aminy ny zanak’Israely voababo, Andriamanitra mihaino sy mahatsiaro : « Koa nohenoin’Andriamanitra ny fitarainany ; tsaroan’Andriamanitra ny fanekeny tamin’i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba. Nijery ny zanak’Israely Andriamanitra ka nahafantatra azy » (Eks. 2, 24-25). Avy amin’ny fahatsiarovan’Andriamanitra nisian’ny fahafahana tamin’ny famoretana, tanteraka tamin’ny alalan’ny famantarana sy ny zava-mahatalanjona. tamin’io fotoana io ny Tompo no nanome an’i Moizy ny hevitry ny famantarana rehetra : « mba ho tantarainao amin’ny zanakao aman-jafinao ny zava-dehibe nataoko tany Ejipta, sy ny famantarana vitako teo amin’izy ireo, ka ho fantatrareo fa Tompo aho. » (Eks. 10,2). Ny trangam-piainana ao amin’ny Eksaody dia mampianatra antsika fa ny fahafantarana an’Andriamanitra dia miampita aloha amin’ny fitantarana, amin’ny taranaka mifandimby, hoe ahoana no fomba nitohizan’ny maha eo azy hatramin’izao. Ny Andriamanitry ny aina dia mampita amin’ny fitantarana ny aina.
Jesoa mihitsy no miresaka an’Andriamanitra, tsy amin’ny alalan’ny lahateny saro-takarina, fa amin’ny fanoharana, tantara fohy, notsoahina avy amin’ny fiainana andavanandro. Eto, lasa tantara ny fiainana, ary avy eo, ho an’ny mpihaino, lasa fiainana ny tantara : io fitantarana io dia sady miditra amin’ny fiainan’izay mihaino no manova azy.
Na ny Evanjely aza, tsy hoe kisendrasendra, dia tantara. Rehefa mampahafantatra antsika ny momba an’i Jesoa izy, dia « mamolavola antsika ho tsara », mampifanaraka antsika amin’i Jesoa : mangataka amin’ny mpamaky ny Evanjely mba handray anjara amin’io finoana io mba hizara fiainana mitovy. Miteny amintsika ny Evanjelin’i Md Joany fa ny mpitantara tsara indrindra - ny Teny- no lasa fitantarana : « Ny Zanaka tokana nateraka, izay Andriamanitra, izay ao anatin’ny Ray ihany no hany nitantara azy. » (Jn 1,18). Nampiasaiko ny voambolana hoe « nitantara » satria ny fiaviany exeghésato angamba dia nadika hoe « nanambara » na « nitantara ». Niditra tamin’ny maha olombelona antsika Andriamanitra, nanome antsika fomba vaovao hanenomana ny tantarantsika.
4. Mihavao ny tantara
Tsy vakoky ny lasa ny tantaran’i Kristy, tantarantsika io, mitoetra lalandava. Maneho amintsika fa entin’Andriamanitra am-po ny olombelona, nofontsika, tantarantsika, amin’ny fotoana hahatongavany ho olona, nofo, sy tantara. Nambarany amintsika ihany koa fa tsy misy tantaran’olombelona tsy misy heviny na kely. Rehefa tonga tantara Andriamanitra, ny tantaran’olombelona rehetra, amin’ny lafiny iray, dia tantaran’Andriamanitra. Amin’ny tantaran’ny olombelona tsirairay, manavao ny tantaran’ny Zanany nidina tety an-tany ny Ray. Ny tantaran’ny olombelona tsirairay dia manana ny hasiny tsy azo setraina. Noho izany, mendrika tantara ny olombelona, amin’ny haavony, haavo mahafanina sy mahavariana izay nanandratan’i Jesoa azy. « Eny – hoy i Md Paoly- miseho miharihary fa ianareo no taratasin’i Kristy, nampanoratiny anay, tsy tamin’ny ranomainty fa tamin’ny fanahin’Andriamanitra velona, ary tsy tamin’ny takela-bato fisaka, fa tamin’ny takela-nofo kosa, dia ny fonareo izany.» (2 Kor. 3,3). Voasoratra ao amintsika ny Fanahy masina, ilay fitiavan’Andriamanitra. Ary eo am-panoratana izany amintsika izy no mandraikitra ny tsara sy mampahatsiahy antsika izany. Mampahatsiahy izay midika hoe mamerina ao am-po, « manoratra » eo amin’ny fo. Amin’ny alalan’ny asan’ny Fanahy Masina, ny tantara rehetra, eny na hatramin’ireo tena hadino aza, eny fa na ireo toa soratana miolakolaka aza, dia mety hampiakatra ny aingam-panahy, azo averina indray ho toy ny sangan’asa, ka tonga fanohizana ny Evanjely. Toy ny Fibebahan’i Augustin (Les confessions). Toy ny Tantaran’ny Fivahinianana masin’i Ignace (Le récit de pèlerin). Toy ny Tantaran’ilay fanahin’i Terezin’i Jesoa zazakely (L’histoire de l’âme). Toy ny Mpifamofo (Les fiancés), toy ny Karamazov mirahalahy (Les frères Karamazov). Toy ireo tantara hafa tsy hita isa, izay maneho amim-pomba mahagaga ny fihaonana eo amin’ny fahafahan’Andriamanitra sy ny fahafahan’olombelona. Isika tsirairay dia mahafantatra tantara samihafa izay manentoento Evanjely, maneho ny Fitiavana izay manova ny fiainana. Mangataka ny hozaraina sy hotantaraina ireo tantara ireo mba hiaina amin’ny fotoana rehetra, amin’ny fiteny rehetra, amin’ny fomba rehetra.
5. Manavao antsika ny tantara
Isaky ny tantara lehibe, dia miditra an-tsehatra ny tantarantsika. Amin’ny famakiana ny Soratra masina, ny tantaran’ny olomasina, ary ireo lahatsoratra izay mahay mamaky ny fanahin’ny olombelona sy manandratra ny hakantony, afaka manoratra malalaka ao am-pontsika ny Fanahy Masina, amin’ny fanavaozany ao anatintsika ny fahatsiarovana izay maha eo imason’Andriamanitra. Rehefa mahatsiaro ny fitiavana izay nahary sy nanavotra antsika isika, rehefa asiantsika fitiavana ny tantaran’ny andavanandrom-piainantsika, rehefa mandrary famindram-po amin’ny firindran’ny androntsika, dia mamadika pejy isika. Tsy miraikitra intsony amin’ny nenina sy ny alahelo isika, mifatotra amin’ny fahatsiarovana marary izay mamatotra ny fontsika fa, rehefa manokatra ny fo amin’ny hafa isika dia misokatra amin’ny fijerin’ilay Mpitantara.
Ny fitantarana ny tantarantsika amin’Andriamanitra dia tsy hoe tsy misy ilàna azy : na dia tsy miova aza ny fitantarana ny zava-mitranga, ny heviny sy ny fomba fijery miova. Ny mitantara amin’ny Tompo, dia miditra ao amin’ny fijerim-pitiavany mangoraka antsika sy ny hafa. Azontsika tantaraina aminy ny tantara iainantsika, ny mitondra ny olona, ny manankina aminy ny zava-misy. Azontsika atao ny mandray indray miaraka aminy ny lambam-piainana, amin’ny fanjairana indray ny tapaka sy ny rovitra. Firy no ilaintsika, ny rehetra !
Miaraka amin’ny fijerin’ny Mpitantara – ilay hany tompon’ny hevitra farany- mifanatona amin’ny mpandray anjara isika, ny rahalahy sy anabavy, mpikatroka miaraka amintsika amin’ny tantara ankehitriny. Eny, tsy misy na iray aza mpitan-damba amin’ny tranga maneran-tany ary ny tantaran’ny tsirairay dia misokatra amin’ny mety ho fiovana. Ary na rehefa mitantara zavatra ratsy aza isika, azontsika atao ny mametraka habaka ho an’ny fanavotana, azontsika atao ihany koa ny mamantatra ny herin’ny tsara, ao amin’ny ratsy, ary manome toerana azy .
Tsy hoe manaraka ny lojikan’ny storytelling, na manao dokam-barotra, fa mahatsiaro ny maha eo imason’Andriamanitra, sy maneho amin’ny hafa izay nosoratan’ny Fanahy ao am-pontsika, ary manambara amin’ny rehetra fa ny tantarany dia mirakitra zava-mahagaga. Noho izany, hitoky amin’ilay vehivavy namolavola ny maha olombelona an’Andriamanitra tao an-kibony isika ary araka izay voalazan’ny Evanjely, nanao izany araka izay nianatra taminy izy. I Maria Virjiny, noho izany, nitadidy izany zavatra rehetra izany, ka nieritreritra azy tao am-pony. (jr. Lk 2,20). Angatahantsika ny fanampiany, izy ilay afaka mamaha ny fatoran’ny fiainana amin’ny herim-pitiavana mamy :
Ry Maria, vehivavy sady reny, ianao no namolavola tao an-kibonao ny Tenin’Andriamanitra, Ianao nitantara tamin’ny fiainanao ny asa mahagagan’Andriamanitra. Henoy ny tantaranay, tehirizo ao am-ponao, ary ataovy anao ihany koa ireo tantara izay tsy tian’ny olona henoina. Ampianaro anay ny mahalala ny tady tsara mitarika any amin’ny tantara. Jereo ireo vona mampifamatotra ny fiainanay, izay mandemy ny fitadidianay. Miaraka amin’ny tananao malefaka, afaka mivaha ny vona rehetra. Ry Vehivavin’ny Fanahy, renin’ny fahatokiana, entano ihany koa izahay. Ampio izahay hanorina tantaram-piadanana, tantaran’ny ho avy. Ary atoroy anay ny lalana iarahanay mizotra.
Natao teto Roma, Tao Saint Jean de Latran, 24 janoary 2020,
Fahatsiarovana an’i Md François de Sales.
RTCM : Notokanana ny televiziona katolika voalohany eto Madagasikara - il y a 7 heures